डचटाउन पास्ट Happy DutchtownSTL.org .org डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO बाट छुट्टीको छुट्टिहरु
डचटाउन विगतबाट खुशीका छुट्टिहरू
प्रकाशित डिसेम्बर 14th, 2020
प्रारम्भिक पूर्वानुमानले सुझाव दिन्छ कि हामी २०२० मा ह्वाइट क्रिसमसको लागि होइनौं। जे होस्, डचटाउन विगतका यी हिउँले ढाकेका फोटोहरूले हामीलाई छुट्टीको भावनामा समाहित गरे! यी पुराना तस्बिरहरू दुई प्रमुख सम्पत्तिहरू हुन् जुन एक पटक मेरैमेक स्ट्रिट र भर्जिनिया एवेन्यूको नजिक डाउनटाउन डचटाउनमा अवस्थित थिए।
शीर्षमा बार्नार्ड हवेली छ, जुन पहिले मेरामेक स्ट्रिट र भर्जिनिया एवेन्यूको कुनाको नजीक छ। तल जोन वोनल डन हाउस छ जो एक पटक मेरामेकको 3400 XNUMX०० ब्लकमा उभिए।
ऐतिहासिक फोटोहरू मार्क लोहररद्वारा रंगीएको थियो। मार्क एक स्थानीय इतिहासकार हो जसले चलाउँछन् आर्च सिटी ईतिहास इन्स्टाग्राम खाता जुन सेन्ट लुइसभरि छिमेकबाट हजारौं रंगीन छविहरू देखाउँदछ। त्यहाँ एक छ आर्च सिटी ईतिहास अनलाइन शप जहाँ तपाईं सामान्य मूल्यहरूमा फोटोहरूको धेरै प्रिन्टहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
मार्कको संग्रह समावेश दर्जनौं of डचटाउन फोटो कुनै दिन आफ्नै पदको लागि योग्य। यद्यपि यद्यपि हिउँदको आश्चर्यजनक ठाउँलाई यी भव्य घरहरूको वरिपरि प्रशंसा गर्दा हामी प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई नियालौं जो यी घरहरूमा बस्ने गर्थे र डचटाउनको प्रारम्भिक नागरिकहरू थिए।
जोन Withnell डन
जोन वोनल डन हाउस १ 1873 मा 3418 XNUMX१XNUMX मेरामेक स्ट्रिटमा निर्माण गरिएको थियो। डन जोन डनका भतिजा थिए जो एक ठेकेदार र स्टोन मेसन थिए जसले दुवै पुरानो क्याथेड्रल र मिसुरी राज्य क्यापिटल बनाए। काकाले डचटाउनमा सानो भवन पनि दान गरे जुन पादुआको पहिलो भेला हुने स्थानको सेन्ट एन्थोनीको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो।
जोन वेनेल डन मिसौरी हाउस अफ डेलीगेट्सका तीन कार्यकालका सदस्य थिए जसले घर जग्गाको लागि सानो भाग्य कमाए। उनी एक्विन क्याथोलिक गिर्जाघरको सेन्ट थॉमसमा सक्रिय पार्सीयन थिए। यो पेरिस अब सञ्चालनमा छैन, तर चर्च र स्कूल अझै आयोवा र ओसेजको लाक्लेडे पार्कको उत्तरमा अवस्थित छन्।
१n०० को दशकको अन्ततिर फोटोग्राफीको बखत डन एक प्रशंसनीय शौकिया फोटोग्राफर र सेन्ट लुइस क्यामेरा क्लबको सदस्य पनि थिए। उनका छोरा, जेडब्ल्यू डन, जूनियर, आफ्नो बुबाको फोटोग्राफी स sharing्ग्रह साझेदारीमा रमाईलो देखिन्थे जेठाको मृत्यु पछि।
जोन Withnell डन द्वारा फोटोहरु मा देखा पर्दै सेन्ट लुइस स्टार र टाइम्स.
डन १ 1931 .१ मा 86 1940 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। उनको एक्लिन सेन्ट थॉमसमा अन्त्येष्टि पछि कलवारी कब्रिस्तानमा गाडियो। घरलाई १ XNUMX s० को दशकमा ध्वस्त पारिएको थियो सुपरमार्केटको लागि मार्ग बनाउनका लागि। प्रतिस्थापन भवन अब घर छ Resalat सामुदायिक केन्द्र.
विलियम DW बर्नार्ड
डा। विलियम डीडब्ल्यू बर्नार्ड एक थोक ड्रगिस्ट थिए जसले गृहयुद्ध भन्दा पहिले डचटाउनमा आफ्नो सम्पत्ति निर्माण गरे। 3316 4227१1962 मेरामेक स्ट्रिटमा हवेली विशाल जमिनमा बस्यो। पछि घर कुनाको वरिपरि XNUMX२२XNUMX भर्जिनिया एवेन्यूमा सारियो। हालको तल्लो उचाइमा अपार्टमेन्ट भवनको लागि बाटो बनाउन घर १ XNUMX .२ मा ध्वस्त पारियो।
बार्नार्ड डेन्ट परिवार र ज्युलिया डेन्टसँग चचेरा भाई, जनरल युलिसिस एस ग्रान्टकी पत्नीसँग सम्बन्धित थियो। बर्नार्ड्स एक पटक तिनीहरूको दक्षिण पक्ष को घर मा अनुदान होस्ट। जब ग्रान्ट सेनामा एक लेफ्टिनेन्ट थियो, बर्नार्डले उनलाई आवश्यक समयमा आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव राखे। पछि, राष्ट्रपति ग्रान्टले पक्षधरता फिर्ता गर्ने थियो जब बार्नार्डले व्यावसायिक समस्याहरूको सामना गरे।
बार्नार्ड Hospital of वर्षको उमेरमा १ 1902 ०२ मा सिटी अस्पतालमा गए।
यदि तपाईं डचटाउन र अधिक भन्दा अधिक इतिहासको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, माथितिर जानुहोस् आर्च सिटी ईतिहास इन्स्टाग्राम पेज। र केहि जाँच गर्नुहोस् बिक्रीको लागि प्रिन्टहरूYइनीहरूले ठूलो छुट्टी उपहारहरू बनाउँदछन्!
तल दायर गरिएको डचटाउन ईतिहास. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. वास्तुकला, डचटाउन ईतिहास, र फोटोग्राफी. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो डिसेम्बर 14th, 2020 .
DutchtownSTL.org डचटाउन ईतिहास डचटाउन विगतबाट खुशीका छुट्टिहरू